Apple na-ebupụta ... Ekwentị. Onwere onye ozo na-ekwo ekwo? | Martech Zone
Tuesday, January 9, 2007 Saturday, October 20, 2018 Douglas Karr
Guysmụ nwoke nwere ike ma ọ bụ na ị maghị na m kwagara MacBook Pro na-arụ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya. Obi dị m ụtọ na ya, ọ mara mma. OSX dị ukwuu… mana m ka nwere ngwa ndị dara ada na m ka nwere nsogbu na ya. Anaghị m ahụ ya n'anya nke ukwuu na ezinụlọ m niile bụ Mac. Enwere m otu G4 na kọmputa m ndị ọzọ bụ PC na-agba XP, yana Buffalo Linkstation na-agba Linux.
Ọ bụ m bụ naanị onye na-enweghị mmasị na Apple wuru ekwentị? Ọ bụ ndị ekwentị! A na-eji okwu ndị dị ka 'mgbanwe' eme ihe. Revolutinary? N'ezie? Kedu ihe m na-efu? Nke a ọ bụghị naanị ekwentị 2.0?
Ka anyị gbadata ndepụta atụmatụ ma gwa m ebe m na-agahie:
Kama igodo ọkọlọtọ, iPhone na-eji teknụzụ Apple nke amachibidoro "multi-touch". Ọ naghị eji mkpịsị arụ, nwere “mmegharị mkpịsị aka ọtụtụ” ma na-ekwu na ọ ga-eleghara mmetụ ahụ anya. Ọrụ tụnyere ya Apple UI abụọ ndị ọzọ na - eme mgbanwe - òké na Macintosh na igwe mkpịsị aka na iPod.
Jụụ, ha mere ka mpempe aka metụ mma.
3.5 inch touchscreen na mebere kiiboodu.
Chaị, nnukwu ihuenyo. Enweela m akara ngosi 'virtual' na ekwentị m.
iPhone na-agba ọsọ OS X, sistemụ arụmọrụ Apple; Dabere na mkpuchi mkpuchi Engadget: "Ka anyị mepụta ngwa klaasị desktọọpụ na ịkparịta ụka n'networkntanet, ọ bụghị ihe adịghị ike ị hụrụ na ọtụtụ ekwentị, ndị a bụ ezigbo ngwa desktọọpụ."
Enwere m ike ịgba ọsọ onye ihe osise na ihuenyo 3.5 ″? Ee! Ọ na-abịa na 2Gb nke RAM?
Mmekọrịta na iTunes: “iTunes ga - emekọrịta mgbasa ozi gị niile na iPhone gị - kamakwa ụda data. Ndi ana-akpo, kalenda, foto, ndetu, ibe edokọbara, akaụntụ email… ”
Yup, nwetara nke ahụ na ekwentị m ugbu a, kwa.
Apple si imewe ibe n'ibe nile iPhone: “3.5-anụ ọhịa ihuenyo, kasị elu mkpebi ihuenyo anyị na mgbe Ẹnam ekese, 160ppi. E nwere nanị otu bọtịnụ, na “ulo” button […] thinner than any smartphone… ”
Mma… ngwa ngwa… ike… ọ bụ $ 6 Ijeri ekwentị.
Igwefoto 2 megapixel wuru na ya
Yup, nwetara nke ahụ. Ekwentị m na-emekwa vidiyo na ọdịyo.
Njirimara mgbasa ozi puru iche - pịgharịa na egwu gị, vidiyo sara mbara, nka ọba, okwu igwe okwu…
Enwekwara ụfọdụ n'ime nke ahụ. 3.5 ″ bụ widescreen? Maka onye, ​​a flea?
Mmekọrịta gị iPhone na PC gị ma ọ bụ Mac (maka kọntaktị wdg)
Njirimara ekwentị ọkọlọtọ - SMS, kalenda, foto, wdg. Site na foto enwere ihe ngagharị nke na-agbanwegharị foto mgbe ị na-agbanye ekwentị.
Ihuenyo m na-agbagharị mgbe m wepụrụ keyboard. Ok… inwetara m… ihe mmetụta sensọ dị ụtọ.
Ozi olu anya
.Tọ. Olu na ederede bụ ihe m chọrọ mgbe m na-enyocha ozi olu m n'okporo ụzọ! M nwere ike pịgharịa jiri mkpịsị aka abụọ ka m na-agbaba n'ime nchekwa!
Ozi email HTML bara ụba - na-arụ ọrụ ọ bụla IMAP ma ọ bụ ọrụ email email POP3. Nke a bụ nsogbu nye Blackberry!
M na-eme nke ahụ.
Ihe nchọgharị Safari na-agba ọsọ na iPhone - “ọ bụ ihe nchọgharị zuru ezu iji rụọ ọrụ na ekwentị.” Ọrụ na-egosi NYT na-agba ọsọ na iPhone - ezigbo weebụsaịtị, ọ bụghị ụdị WAP puny.
Shenannigans! M na-agba ọsọ Opera Mobile na ọ bụ 'n'ụzọ zuru ezu-eji'.
Site na ihe nchọgharị na njikọ… yup, m na-eme nke ahụ. N'ezie mmezi inch nke ihuenyo ga-enyere m aka ịchọta ụzọ m mfe.
Wijetị nke jikọtara na Internetntanetị n'enweghị nsogbu (site na WiFi na EDGE)
Ya mere enwere m ike ịlele ihu igwe ka m na-aga ọrụ! Oh… chere a sec…
Free “inupụ” IMAP email si Yahoo
Amaara m na m na-agbagharị agbaghara banyere nke a, mana anaghị m enweta ya. Na-ada ka otutu nke mkpuchi maka nkwalite ekwentị, ọ bụghị ya?
Tụfuo vidio brọdband na njikọta vidiyo na nwa ọjọọ ahụ na Star Trek geek a ga-akụ n'uko ụlọ. Ma, ewepụghị ya, nke a bụ naanị… ịsị obi say.
Gịnị bụ ihe ọzọ, Apple ebupụta TV? Umm….
PS: Mgbaghara pụrụ iche nye Bill… ọ nọ n'akụkụ onwe ya na-a saliụ nri ehihie taa ma na-agbakọ afọ ole ọ lara ezumike nká ọ ga-ahapụ ịzụrụ otu. Anaghị m achọ ịkparị gị Bill, mana nke a bụ ụfọdụ m achọ ịma mma ahịa mama maka a ekwentị.
Tags: apụlapple iphoneiphone
M ka na-eche ndị nnupụisi .. na Apụl 🙂 🙂
Emeela m $ 400 n'oge na-adịghị anya na vidiyo iPod na ngwa ka m wee ghara ịchọ ịzụta iPhone. Fọdụ ndị nwere ike ịhụ iPhone n'anya, mana m na-ahọrọ ngwaọrụ dị iche maka ekwentị na MP3 ọkpụkpọ karịa ngwaọrụ nke nwere ike ịbụ "jaak nke ndị ahịa niile enweghị".
Echere m na ihe ahụ mere iPhone ji pụọ iche ga-adị mfe. Abụzi m onye nwe ekwentị na-enweghị isi na-eche na ọ na-eme ya niile. Mana ị ga-agbanye ọtụtụ bọtịnụ (ma enwere ọtụtụ nke ha), na ọ na-ewepụ m. Mkpọka oge niile. Ọ dịghị mfe synching (hey, dị ka nke taa enweghị m ike synch ya na OSX). Ahụhụ.
Yabụ, ee, atụmatụ ọ bụla nwere ike ọgaghị abụ nke pụrụ iche n'onwe ya, mana eziokwu ahụ bụ na Apple jikọtara ya na-eme m olileanya na enwere ike inwe PDA ekwentị nwere ike iji ya rụọ ọrụ.
Mfe bụ okwu m.
Enwere m na ị nwetara mkpọka na OSX. Ana m arụ ọrụ vidiyo na-achọsi ike na ngwa m, ma na-adaba na mberede. Eleghi anya otu kwa izu - ma ọbụnadị achọghị m ịmalitegharị. You na-eji ọtụtụ nkwụnye mgbakwunye nke ndị ọzọ?
Ngọnarị: Abụ m ezigbo obi ụtọ nwe ihe dị ka 5 Mac 🙂
Achọghị m ka onye ọ bụla chee na m bụ onye ahịa Apple enweghị obi ụtọ… n'ụzọ ọ bụla, ahụrụ m MacBook Pro n'anya. Ọ dị nwute, ọ naghị ahapụ m n'akụkụ! Isi okwu gị banyere ‘ịdị nfe’ bụ ihe niile m gabigara ugbu a. M nnọọ na-e aback niile mama na ekwentị!
Ekwesịrị m ịkọwapụta… Ọ dịghị mgbe m kwụsịrị OSX, naanị ụfọdụ mmemme na-agba ọsọ.
Nkwupụta M: M ga-enwe 5 Macs ma ọ bụrụ na m nwere ike imeli ha. 😉
Ekwu okwu dika ezigbo Mac N00b. Ikowe ebe Doug…. ị ga-enweta ya.
O bughi gi bu onye ahu gha agwa m mgbe you zutara ihe…. “Ee…. ma ọ bụ ihe jụrụ oyi. ”
i kwuru Super-duper
🙂 Ee - anyị Applefans na-agbachitere always
Apple dị nnọọ mma na mama ha. Mgbe m na-ekiri isi okwu, a na-anwa m ọnwụnwa ịmegharị bọtịnụ "Zụta ugbu a". 'Luckily' ezie, ngwaahịa na-abịa mgbe e mesịrị na Europe (na ọbụna mgbe e mesịrị na Norway) karịa US, otú ahụ ka m nwere ike mgbe niile na-agụ ụfọdụ ezigbo ndụ ahụmahụ n'aka “nkịtị” ọrụ.
"Revolutionary" na AppleTalk pụtara "Ọ na-arụ ọrụ". N'ụzọ dị mwute, nke ahụ abụghị ụkpụrụ ụlọ ọrụ…
Jenụwarị 10, 2007 na 7:44 PM
M ọzọ, olileanya na m na-agaghị ghọọ a blog stalker 😉
Naanị hụrụ isi okwu ngosi maka iPhone, ọ dịkwa ka ekwentị ahụ ga-eme nchọgharị weebụ ọ bụghị naanị na ọ ga - ekwe omume (dị ka ọtụtụ ekwentị na - eme ugbu a), mana ọ na - atọ ụtọ. Otu na-aga maka ọtụtụ atụmatụ ya.
Ihe dakwasịrị m mgbe nke ahụ gasịrị bụ na, hey, ihe a na-agba ọsọ OSX ma nwee ike Desktọpụ - mana ọ nweghị otu ngwa iji gosipụta n'oge ngosi ahụ. Yabụ: ọnwa ruo mbupu agaghị efu nke ọhụrụ mama 😉 Apple dị mma na nke a.
Echetara m mgbe iPod izizi bịara, ọtụtụ geeks na-akatọ ya. Echetara m otu na-ekwu “nke ọma, ọ bụ obere harddisk, yabụ gịnị?”. Taa ka ha nwere ahịa.
N'ahịa ekwentị ha bụ ntinye oge, mana ha siri ike na enweghị ike, ha ga-enwekwa nkesa nkesa dị mma na US. Yabụ, 1% azụmaahịa na 2008 ekwesịghị ịbụ ebe iru.
Oge obi ụtọ 🙂
Nke a bụ njikọ na-adọrọ mmasị na ihe nke a nwere ike ịpụta maka mbipụta n'ozuzu yana site na ndọtị na ịde blọgụ: http://www.buzzwordcompliant.net/index.php/2007/01/10/two-approaches-to-mobile-publishing/
Ma eleghị anya ị chọpụtawo nke ahụ Yvonne laghachite n'etiti ndi di ndu.
Aha ya bụ Pat Phelan
Abụ m ezigbo comatose
Ndị Fans Apple kwesịrị ịpụtakwu
Sep 2, 2008 na 8: 08 AM
Hind na ịsị, ị ga-agụgharị post a this?
O yiri ka iPhone ọ nwere mmetụta ụfọdụ, ọ gbanwere usoro ojiji m na ịntanetị.
Ekwentị ndị ọzọ m nwere na mbụ nwere ike ịrụ ọrụ ndị a, mana ha siri ike, na-agbagwoju anya ma na-adịghị nwayọ.
Sep 2, 2008 na 8: 49 AM
Amaghị m, Foo. The ahịa òkè na ewu ewu abụghị a anya nyere òtù nzuzo nke Apple. Arụ ọrụ a bụ nkwalite, ngosipụta na nzaghachi mmetụ ka mma, mkpebi ka mma… yana ngwa ahịa (abụghị nke mbụ). Echere m na ha buliri ogwe ahụ n'ezie - mana anaghị m ahụ ọtụtụ ihe karịa 'ihe' dị mma.
N'akụkụ dị njọ, iPhone ka na-enweta akara dara ogbenye maka iji aka arụ ọrụ (ị ga-ele ya anya iji ya, na-ejikarị aka abụọ) ma enwere ọtụtụ mgbochi - gụnyere igbu ọkụ, nkwarụ nkwarụ (iji ya dị ka Intanet conn maka laptọọpụ gị), ogo belatara n'okpuru 3g, na ndị ọzọ.
Na-agbadata anwụrụ bụ ihe na-akpali mmasị karị - iPhone na-aga isi na obere egwuregwu egwuregwu. Nke ahụ nwere ike ịbụ onye na-agbanwe ahịa!
Gam akporo bu Mobile OS nwere anya m n’elu ya. Ekwentị mepere emepe nke nwere ike ịgba ọsọ n'ihe ngwaike ọ bụla na enweghị enweghị ike yana ụlọ ahịa ngwa mepere emepe nwere ike ịbụ nnukwu itu ukwu karịa iPhone.